Kedu usoro gị maka Iweghachite Ahịa? | Martech Zone
Tuesday, April 7, 2009 Mọnde, Febụwarị 8, 2016 Douglas Karr
N'ọtụtụ posts ekwuru m banyere ya "Nweta, jigide ma too" atụmatụ maka ụlọ ọrụ iji bulie azụmaahịa ha, mana otu akụkụ echeghị m na m dere banyere ya na-agbake ndị ahịa. Ebe ọ bụ na m nọ na ụlọ ọrụ ngwanrọ, ahụtụbeghị m ndị ahịa na-alọta yabụ na anyị etinyeghị usoro iji gbalịa inweta ndị ahịa. Nke a apụtaghị na ekwesighi ime ya.
Anọ m na ogbako WebTrends Engage na Onye isi ala Alex Yoder tụlere atụmatụ ahụ ma gbakee dị ka atụmatụ nke anọ. Nkwuputa WebTrends nwere mmekorita ya na Radian6 na-arụtụ aka na atụmatụ siri ike nke mgbake - ọ bụghị naanị ike ige ntị n'ihe ndị ahịa na-ekwupụta, mana arụmọrụ na-arụ ọrụ iji nyefee ọrụ na ibute ụzọ mgbasa ozi mmekọrịta (site na mmetụta).
Anyị na-ebi na ọnụ ala dị ala, nnukwu ụwa na ụlọ ọrụ nwere oge siri ike ijikwa ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ahịa na-agbasa n'ọtụtụ ọnụọgụ. Usoro ndị a bụ ụzọ dị mkpa iji soro ndị ahịa gị na-ekwurịta okwu nke ọma, na-achịkwa aha gị na ịchọta atụmanya.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, jikọtara ya, nyiwe ahụ na-enye ụlọ ọrụ ohere ọ bụghị nanị na ọ na-ede aha ya ezigbo oge, kamakwa ị na-eme mkparịta ụka ozugbo. Nke a bụ mmeri maka ndị ahịa na ụlọ ọrụ… ndị na-eri ihe nwere ike ime ka netwọkụ ha na mmekọrịta ha nwee ike ime ka ụlọ ọrụ na-ege ha ntị, ọ bụghị naanị zoo n'azụ nọmba 1-800 na enweghị ngwụcha na-adịghị agwụ agwụ iji dọọ onye ahịa iwe iwe.
Iji nwalee usoro, M tweeted banyere WebTrends n'oge ngosi na WebTrends nke Jascha Kaykas-Wolff hụrụ m na ndị na-ege ntị n'oge Keynote ma gosi m aha na Twitter na iPhone ya. Ihe dị jụụ! WebTrends kwupụtakwara Open Exchange - usoro data ha mepere emepe na-enye ndị ahịa ohere ịnweta data ha n'efu site na API. Ka ha na-etinye ya, “Ọ bụ data gị, ị gaghị akwụ ụgwọ maka ya!” (Amen!). Ha malitekwara netwọkụ mmepe ha.
Mightfọdụ nwere ike ichegbu onwe ha dị ka olu data azụmaahịa na-achịkọta gbasara ndị ahịa ha. Alex kwuru banyere otu ụlọ ọrụ ọ na-azụta ihe na ha nwere ihe karịrị 2,000 data gbasara ya. Enweghị m nchegbu banyere ihe ole ụlọ ọrụ mara banyere m… M ọzọ nchegbu ma ma ha na-eji na ozi na-emeso m mma!
Have nwere usoro mgbake maka ndị ahịa hapụrụ? O yiri ka ọ dị onye maarala ngwaahịa gị, ụlọ ọrụ gị, wdg. Nwere ike bụrụ nnukwu onye ahịa iji merie… ma nwere ike ịbụ obere ego iji nweta onye ahịa ọhụrụ kpam kpam. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ, ịnwere ike ịlele ngosipụta nke Radian6 wee lebakwuo anya na nke gị nchịkọta mwekota iji chọpụta ma ọ na-egbo mkpa gị.
Tags: daalụ ọzọahịa mgbakenjigide ndị ahịaJascha Kaykas-Wolffwebụsaịtịmerie ndi ahia ozo
Ọ dị m ka ya bụrụ na m nọ na mmemme ahụ, yabụ ekele maka nchịkọta nke isi okwu yana ịdekwa gbasara ọkwa mmekorita WebTrends / Radian6.
Ahụrụ m gị n'anya na ya dịka ọ na-eweta ụlọ ọrụ nwere nnukwu ohere iji melite ọrụ ndị ahịa yana ịge ntị karịa ndị ahịa ha, "ọ bụghị naanị zoo n'azụ nọmba 1-800" ka ị na-ekwu.
Ndị ụlọ ọrụ nwere ohere ịghọ ndị ọzọ, na-anabata, ma na-ewulite mmekọrịta n'etiti ndị ahịa n'ụzọ ọhụrụ ọhụụ niile site na ịge ntị na ịntanetị na ịzaghachi.
Daalụ nke ukwuu maka ịnọnyere anyị na Engage. Agbanyeghị na ị gbaghaara na ọ dị ngwa, echeghị m na post gị na-anọchite ụdị ihe ọ bụla.
Emefuola m ọtụtụ ọrụ m na ngwanrọ / ahịa na m ga-asị na usoro mgbake ndị ahịa dị oke mkpa maka ọganiihu ogologo oge. N'agbanyeghị ngwaahịa ndị ị na-ere, akara dị adị nke otu akara bụ etu ha si emeso ndị ahịa ihe mgbe ihe adịghị mma. Ọ bụ eziokwu maka anyị na ngwanrọ.
Na post gi ikwuru na ahuru m gi wee gosi gi tweet gi na iphone m. Ọ dara ụda, n'ihi ya, enwetaghị m ịkọwa akụkọ ahụ dum. Ihe m gosiri gị bụ ọkaibe n’ezie nke ezitere m site na Webtrends Social Measure powered by nke Radian6. Anyị na-eji ngwá ọrụ na ndị otu m taa wee hụ ya n’anya; ndi otu Radian6 di egwu na oru.
Naanị m ga-enwe ike ịbịa bia hi hi kama ime ya na digitally :)